Lego DOTS နွေရာသီ 2020 ပုံရိပ်တွေကို set
21 / 05 / 2020 31 / 05 / 2020 ဂရေဟမ် 902 Views စာ0မှတ်ချက် 2020, 41907 စားပွဲတင်စီစဉ်သူ, 41911 Go Team! လက်ကောက်, 41913 လက်ကောက် Mega Pack ကို, 41914 Creative ရုပ်ပုံများ, 41915 လက်ဝတ်ရတနာ Box ကို, 41916 E ကိုxtra DOTS စီးရီး 2, 41917 မှော်သစ်တောလက်ကောက်, 41919 ပါဝါလက်ကောက်, DOTS, Lego, Lego DOTS, LEGO.com
အသစ်လှိုင်း Lego DOTS အစုံသည်တရားဝင်ပုံရိပ်များနှင့်အတူဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်လမ်းပေါ်တွင်ရှိသည်။
Lego DOTS ဒီနှစ်မတ်လမှာစတင်ခဲ့ပြီး၊ အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ဇွန်လမှာဖြစ်မယ် ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုကိုလှိုင်းနှင့်အတူ။ ရှစ် အသစ်အစုံ တရားဝင်ပုံရိပ်များ၏ galleris ယခုမှာပုံနှိပ်နှင့်အတူ, လမ်းပေါ်ဖြစ်ကြသည် LEGO.com လာမည့်ထုတ်ပြန်ချက်များပြ။
အစုံပေါင်းစုံပါ ၀ င်သည် - လက်ကောက်အသစ် ၄ လုံးပါသည့်လက်ကောက်အသစ် ၃ ခုနှင့်အတူလာသည်။ E အိတ်အသစ်နှင့်အတူအိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများသုံးသစ်လည်းရှိလိမ့်မည်xtra ကြွေပြားများ။
အစုံတစ်လျှောက်တွင်ပုံနှိပ်ထားသောဒြပ်ထုအသစ်များသည်၎င်းထက် ကျော်လွန်၍ ဆွဲဆောင်နိုင်သည် arts နှင့်ယာဉ်ပရိသတ်ကို Lego DOTS အဓိကအားဖြင့်ပစ်မှတ်ထားသည်။
41911 Go Team! လက်ကောက်
Lego ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ DOTS။ သီးသန့်မေီ Corbett အင်တာဗျူး
41916 E ကိုxtra DOTS - စီးရီး ၁
အဓိကအကြောင်းသည် ကအသစ်တစ်ခု entry ကို LEGO Group ယင်းသို့ arts နှင့်ယာဉ်စျေးကွက်တစ် ဦး ရောနှောနှင့်အတူ အုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောအိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ နှင့် ဝတ်ဆင်လက်ကောက် ကြောင်း 1 × 1 နှင့်ဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါသည် Lego ကြွေပြားများ - လည်းအဖြစ်လူသိများ DOTS။ ထုတ်ကုန်များ ပထမ ဦး ဆုံးပစ်လွှတ်ဖြစ်ရပ်မှာထင်ရှားခဲ့သည် ဒါကလည်းမြင်တော်မူ၏ ၏အိမ်၏အဖွင့် DOTS, အကြားပူးပေါင်း Lego အုပ်စုနှင့် artist Camille Walala ။
← အခမဲ့ LEGO Speed Champions Top Gear မဂ္ဂဇင်းနှင့်အတူ polybag
Lego Xtra လမ်းနှင့်ရေတိပ်ခွေများထုတ်ဖော်ပြသ →